Indawo eyiVenkile yendalo-Ilungelo laseMelika lokwazi
ezaposwa ngomhla Aprili 15, 2021 by UGary Ruskin
ezaposwa ngomhla Matshi 10, 2021 by UCarey Gillam
(Ukuhlaziywa ngo-Matshi 10 ukubandakanya i-odolo yejaji yokulibaziseka ukuva kude kube ngoMeyi 12)
Ngaphezulu kweefemu zamagqwetha angama-90 nangaphezulu kwamagqwetha angama-160 azise ijaji yenkundla yomanyano ejongene ne-US Roundup litigation ukuba bayaphikisana nomnini-Monsanto Bayer AG's $ 2 billion icebo lokuhlawula amabango exesha elizayo inkampani elindele ukuziswa ngabantu abafunyaniswe benomhlaza abatyhola ngokusetyenziswa Iimveliso zeMonsanto zokutshabalalisa ukhula.
Kwiintsuku zamva nje, izichaso ezisithoba ezahlukileyo malunga nesi sicwangciso kunye namaxwebhu amane e-amicus afakiwe kwiNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMantla saseCalifornia, esazisa iJaji uVince Chhabria ubungakanani benkcaso kwindawo yokuhlala ecetywayo. I-Chhabria ijonge amawaka e-Roundup kumatyala asemthethweni omhlaza kwinto ebizwa ngokuba yi 'multidistrict litigation' (MDL).
NgoMvulo, i-National Trial Lawyers (NTL) bajoyina inkcaso egameni lamalungu ayo ayi-14,000. Eli qela lithe xa lifaka inkundla ukuba liyavumelana neqela eliphikisayo ukuba “esi sivumelwano sicetywayo sibeka emngciphekweni ufikelelo kubulungisa kwizigidi zabantu ezikwiklasi ecetywayo, siya kuthintela amaxhoba eMonsanto ekubeni ayiphendulise, kwaye aya kuwuvuza uMonsanto ngeendlela ezininzi. . ”
Eli qela laphindaphinda ukugcwalisa uloyiko lokuba ukuba isindululo sikaBayer sivunyiwe, siyakubeka umzekelo oyingozi kubamangali kwixesha elizayo, amatyala angadibananga: “Kuyakubonzakalisa amalungu ecandelo acetywayo, hayi ukubanceda. Olu hlobo lokuhlala luza kunika itemplate engenakuthenjwa nakwabanye abo babaphatha gadalala ukuze baphephe uxanduva olufanelekileyo kunye neziphumo zokuziphatha kwabo… indawo yokuhlala ecetywayo ayisiyiyo 'inkqubo yezobulungisa' kwaye ngenxa yoko ulungiso olo alunakuze lwamkelwe. ”
I-2 yezigidigidi zeedola ecetywayo ijolise kumatyala exesha elizayo kwaye yahlukile kwi-11 yezigidigidi zeBayer ephawulelwe ukuhlawula amabango akhoyo aziswe ngabantu bethi bakhulise i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ngenxa yokuvezwa ngababulali bokhula bakaMonsanto. Abantu abachaphazeleke sisindululo sokuhlaliswa kweklasi ngabantu abaye babhencwa kwiimveliso zeRoundup kwaye sele benayo iNHL okanye banokuphuhlisa i-NHL kwixesha elizayo, kodwa abangekathathi manyathelo okufaka isimangalo.
Akukho monakalo wohlwayo
Enye yeengxaki eziphambili ngesicwangciso seBayer, ngokutsho kwabagxeki, kukuba wonke umntu e-United States ohlangabezana neekhrayitheriya njengommangali onokwenzeka uya kuthi ngokuzenzekelayo abe yinxalenye yeklasi kwaye axhomekeke kumalungiselelo ayo ukuba akaphumeleli iklasi ngaphakathi kweentsuku ezili-150 emva kokuba iBayer ikhuphe izaziso zokwenziwa kweklasi. Isaziso esicetywayo asonelanga, abagxeki bathi. Ngaphaya koko, icebo ke liyabahlutha abo bantu-abanokungakhethi nokuba babe yinxalenye yeklasi- ukusuka ekunene ukufuna ukohlwaywa xa befaka isimangalo.
Olunye ulungiselelo lokugxeka ukugweba yiminyaka emine "yokuma" ixesha lokuvimba ukufayilwa kwamatyala amatsha.
Abagxeki bayaphikisana nokwenziwa kwephaneli yesayensi eya kuthi isebenze "njengesikhokelo" sokwandisa ukhetho lwembuyekezo kwixesha elizayo "kunye nokubonelela ngobungqina malunga ne-carcinogenicity - okanye hayi - yeyeza likaBayer.
Amajoni kuvavanyo ngalunye kwezi zilingo zintathu akafumananga loo Monsanto kuphela I-glyphosate-based herbicides Njenge-Roundup ibangela umhlaza, kodwa nokuba iMonsanto ichithe amashumi eminyaka ifihla umngcipheko.
Iqela elincinci lamagqwetha abeka esi sicwangciso kunye neBayer athi "izakusindisa ubomi" kwaye iya kubonelela "ngezibonelelo ezinkulu" kubantu abakholelwa ukuba baphuhlise umhlaza ngenxa yokuvezwa yimveliso yenkampani yokutshabalalisa ukhula.
Kodwa elo qela lamagqwetha limele ukufumana i-170 yezigidi zeerandi ngomsebenzi wabo neBayer ukuphumeza isicwangciso esicetywayo, abagxeki bokwenyani bathi bangcolisa ukubandakanyeka kwabo kunye nenjongo yabo. Akukho namnye wamagqwetha abandakanyekayo ekubekeni isicwangciso sokwenza iklasi kunye neBayer emele nabaphi na abamangali kwityala elibanzi leRoundup ngaphambi kweli nqanaba, abagxeki bathi.
Kwenye yeefayile zenkcaso, amagqwetha afuna ukwaliwa kwesi sivumelwano sicetywayo ubhale oku:
"Esi sisombululo sicetywayo sichaswa ngabo baqheleneyo nokumangalelwa kwamatyala abandakanya iimveliso eziyingozi ezinje ngeRoundup kuba bayaqonda ukuba esi sicelo siza kunceda iMonsanto kunye negqiza labacebisi ngenkcitho yezigidi zabantu abatyhilelwe iRoundup.
"Nangona le Roundup MDL iqhubeke ngaphezulu kweminyaka emine, kwaye amanye amatyala eRoundup sele enetyala kwiinkundla zikarhulumente, inkuthazo yoku kulungiswa kwamanyathelo eklasi ayiveli kumagqwetha abephethe amatyala eRoundup kwaye bakholelwa ukuba enye indlela ukuzisombulula kubalulekile. Endaweni yoko, amagqwetha asemva kwesi sihlaliso- kwaye ngamagqwetha hayi amaxhoba eRoundup- ngamagqwetha asebenzisanayo afuna ukunyanzelisa izimvo zabo kubo bonke abaye babhencwa kwiRoundup, ngokutshintshiselwa intlawulo enkulu kakhulu.
“Kodwa oyena mntu uphumeleleyo apha uza kuba nguMonsanto, oza kufumana iminyaka emine yokumangalelwa ngamalungu eklasi, abaza kuphulukana nelungelo labo lokufuna ukohlwaywa kwaye babotshelelwe ziziphumo zeqela lenzululwazi elikhulelwe kakubi. Ukutshintshiselana, amalungu eklasi aya kugxothwa kwenye inkqubo yembuyekezo ebonisa iintlawulo ezincinci, ukwanda kobunzima, kunye nemiqobo ephezulu ukuze bafaneleke. ”
Isicwangciso sokuhlawulwa kukaBayer safakwa kwinkundla ngoFebruwari 3, kwaye kufuneka samkelwe nguJaji Chhabria ukuze sisebenze. Isicwangciso sokuhlawulwa kwangaphambili esangeniswa kunyaka ophelileyo sasikhona ugculelwe nguChabria emva koko warhoxa.
Ukumanyelwa kwetyala kulungiselelwe uMatshi 31 kodwa amagqwetha abeka isicwangciso kunye neBayer acele iJaji uChhabria ukulibazisa ukumanyelwa kude kube ngoMeyi 13, becaphula ububanzi benkcaso ekufuneka bejongile nayo. Ujaji waphendula umyalelo ukuseta kwakhona ukuxoxwa kwetyala ngoMeyi 12.
"Ezi filing zizonke zingaphezulu kwamaphepha angama-300, ukongeza ngaphezulu kwamaphepha angama-400 ezivakaliso kunye nemiboniso," abameli bathi isicelo sabo sexesha elingaphezulu. “Izichaso kunye namaxwebhu e-amicus aphakamisa imiba emininzi, kubandakanya, phakathi kwezinye izinto, ubulungisa bendawo yokuhlala, uhlaselo lomgaqo-siseko oluninzi malunga nokuhlala kunye negqiza lezesayensi elicetyiswayo, imiceli mngeni kwezobuchwephesha kwinkqubo yezaziso, uhlaselo lobulungisa ingxowa-mali yembuyekezo, kunye nemiceli mngeni kwimbalasane, ukongama, kunye nokwanela kweengcebiso zeklasi (kunye nenkqubo engaphantsi).
Amagqwetha afake esi sicwangciso sicetywayo athi angasebenzisa ixesha elongeziweyo ngaphambi kwetyala "ukudibana nabachasi" "ukunciphisa okanye ukunciphisa imiba ekufuneka iphikisiwe kwingxoxo."
Phakathi kweengxoxo malunga nokuhlala kukaBayer okucetywayo, abamangali bayaqhubeka nokufa. Kwinto ekubhekiswa kuyo njenge "Ingcebiso yokufa," amagqwetha ommangali uCarolina Garces afake isaziso kwinkundla yomanyano ngoMatshi 8 ukuba umthengi wabo ubhubhile.
Abamangali abaliqela abanengxaki ye-non-Hodgkin lymphoma bafe okoko kwaqala isimangalo ngo-2015.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, indawo, glyphosate, impilo, herbicides, magqwetha, ubunzima, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, abamangali, Yisonge yonke, San Francisco, inzululwazi, ukubulala ukhula